३ लुम्बिनीका धरोहरहरुः
३.१ मायादेवी मन्दिर
३.२ जन्म स्मारक शिलाः
३.३ मायादेवी मूर्तिः
३.४ पवित्र पोखरी(पुष्करिणी):
३.५ अशोक स्तम्भः
३.६ नयाँ लुम्बिनीः
३.७ लुम्बिनी गुरुयोजनाः
५ पालि ग्रन्थ
६.२ चार आर्य सत्य
६.३ आर्य अष्टांग मार्ग
९ बुद्ध धर्मको साम्प्रदायिक शाखाहरू
१२ बाहिरी सूत्र
लुम्बिनीका धरोहरहरुः[सम्पादन गर्ने]
मायादेवी मन्दिर[सम्पादन गर्ने]
जन्म स्मारक शिलाः[सम्पादन गर्ने]
मायादेवी मूर्तिः[सम्पादन गर्ने]
पवित्र पोखरी(पुष्करिणी):[सम्पादन गर्ने]
अशोक स्तम्भः[सम्पादन गर्ने]
नयाँ लुम्बिनीः[सम्पादन गर्ने]
लुम्बिनी गुरुयोजनाः[सम्पादन गर्ने]
प्रा.केन्जो टांगेद्धारा तयार पारिएको लुम्बिनी गुरुयोजना नेपाल सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र संघबाट सन् १९७८ मा पारित भयो । त्यस अगाडि नै नेपाली सरकारले लुम्बिनीको विकासका लागि लुम्बिनी विकास समितिको गठन गरिसकेको थियो । उक्त समितिले स्थानीय वासिन्दाहरुको जग्गा अधिग्रहण गरी विकासका पूर्वाधारहरुको निर्माण र वृक्षारोपण जस्ता कार्यहरु गर्यो । अहिले पनि लुम्बिनी विकास कोष उक्त गुरुयोजना अनुरुप संरचनाहरु निर्माण गर्न क्रियाशील रहेको छ । गुरुयोजना क्षेत्रले ३ वर्गमाइल क्षेत्रफल ओगटेको छ । यस क्षेत्रलाई प्रत्येक १ वर्ग माइलका ३ क्षेत्रहरुमा विभाजित गरी पैदल बाटो र केन्द्रीय नहरुले जोडिएको छ । ती ३ क्षेत्रहरुः क) पवित्र उदान ख) विहार क्षेत्र ग) नयाँ लुम्बिनी ग्राम हुन् । प्रा.केन्जा टांगेको डिजाइनको प्रमुख आकर्षण नै दक्षिणी भागमा अवस्थित पवित्र उद्यान हो । यस क्षेत्रको डिजाइनको प्रमुख उद्देश्य आध्यात्मिकता, शान्ति, विश्व भातृत्व र अहिंसाको वातावरण सृजना गर्नुका साथै संसारका लागि भगवान बुद्धको समयानुकूल सन्देश प्रतिविम्बित गर्नु हो । पवित्र उद्यानमा पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक धरोहरु अवस्थित छन् भने बगैंचा र सुन्दर पोखरीहरुले यस क्षेत्रलाई अत्यन्त मनमोहन बनाएका छन् । पवित्र उद्यानदेखि उत्तरपट्टि मध्य भागमा जंगलभित्र अवस्थित विहार क्षेत्रलाई केन्द्रीय नहरले विभाजित गरेको छ । पश्चिम विहार क्षेत्रमा २९ वटा प्लटहरु महायानी बौद्धमार्गीहरुका लागि र पूर्वी विहार क्षेत्रमा १३ वटा प्लटहरु थेरवादीहरुका लागि छुट्याइएको छ । सांस्कृतिक केन्द्रमा अनुसन्धान केन्द्र तथा पुस्तकालय, सभागृह र संग्राहलय अवस्थित छन् जसबाट बौद्ध धर्मसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धानकर्ताहरुलाई सुविधा पुग्दछ । गुरुयोजना क्षेत्रको उत्तरी भाग नया“ लुम्बिनी ग्रामको रुपमा विकास भइरहेको छ । यात्रु तथा पर्यटकहरुले यस स्थानमा आरामदायी होटल, लज, रेष्टुरेण्ट तथा अन्य सुविधाहरु प्राप्त गर्नेछन् ।
मूल लेख बौद्ध धर्ममा पञ्चशील
बौद्ध धर्ममा पञ्चशीलको ज्यादै ठूलो महत्व रहन्छ ।  यो बुद्ध धर्मको आधारभूत पाँच शीलहरुको संग्रह हो। अङ्गुत्तरनिकायको अट्ठकादिनिपातमा रहेको दुच्‍चरितविपाकसुत्तमा यी शीलहरुका वर्णन गरिएका छन्। अंगुत्तरनिकायमा दशकनिपातको जाणुस्सोणिवग्गोमा पनि पञ्चशीलको भाव पाइन्छ। सुत्तपिटकको खुद्दकनिकायको खुद्दकपाठमा दशसिक्खापदं भनिएको १० वटा शीलमध्ये पहिलो पाँच पञ्चशीलका शील हुन्। पञ्चशीललाई बुद्ध धर्ममा प्रवेश गर्ने मूलद्वारको रुपमा लिइन्छ। यस अनुसार बुद्धको मार्गमा हिंड्नको लागि प्राणीहिंसा नगर्ने, रक्सी वा मद्यपान नगर्ने, चोरी नगर्ने वा नदिएको नलिने, झुठो कुरा नबोल्ने र आफ्नो पति/पत्नी बाहेक अरुसंग नलाग्ने (भिक्षुहरुले चाहिं कोहीसंग पनि व्यभिचार नगर्ने) प्रण गर्ने गरिन्छ। पञ्चशीलको चाखलाग्दो र अनौठो कुरा के छ भने यस पाठमा कुनै पनि ठाउँमा आफ्नो पुरानो धर्म त्याग्ने वा अरु धर्म छोड्ने विधि लेखिएको छैन। साथै, यी नियमहरु पालना नगरेमा ईश्वर वा कुनै भौतिक शक्तिद्वारा दण्डित गर्ने (वा नर्कमा जाने) पनि उल्लेख गरिएको छैन। धर्म पालना नितान्त व्यक्तिगत रुपमा छोडिएको छ। अतः, बुद्ध धर्म फैलिएका ठाउँमा बुद्ध धर्म भन्दा पहिलेका विश्वासहरुलाई पनि देख्न सकिन्छ। जस्तै: तिब्बती बौद्ध धर्ममा बोन संस्कृति, दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एसियाली बुद्ध धर्ममा हिन्दू संस्कृति, जापानमा शिन्तो, चीनमा ताओ र कन्फ्युसियस संस्कृति बुद्ध धर्म संगै गांसिएको देखिन्छ। यसो हुनुमा पञ्चशीलको उदारता एउटा कारण हो।
पालि ग्रन्थ[सम्पादन गर्ने]
बुद्ध धर्मको मूल ग्रन्थ त्रिपिटक हो। यो ग्रन्थ भगवान बुद्धको परिनिर्वाण पश्चात उहाँका शिष्यहरुले उहाँका उपदेशहरुलाई सुत्रबद्ध गर्ने क्रममा निर्माण भएको ग्रन्थ हो। यस ग्रन्थमा उपदेशहरुलाई "सूत्र" (पालिभाषामा सुत्त)को रुपमा राखिएका छन। सूत्रहरुको संकलनलाई वर्ग (पालिमा वग्ग) र कुनै वग्गहरुलाई निकायमा (सुत्तपिटकमा) वा निकाय जस्तै प्रकारका खण्डहरुमा संग्रहित गरिएका छन। यी निकायहरुलाई संकलन गरी तीन "पिटक" (शाब्दिक अर्थमा टोकरी वा डोको) बनाइएका छन। यी तीन पिटकको संग्रहलाई त्रि-पिटक (पालिमा तिपिटक) भनिन्छ।
प्रतीत्यसमुत्पादको सिद्धान्त भन्दछ कि कुनै पनि घटना केवल दोस्रो घटनाहरूका कारण नैं एक जटिल कारण-परिणामका जालमा विद्यमान हुन्छ । प्राणीहरूको लागि, यसको अर्थ छ कर्म]] र विपाक (कर्मका परिणाम)का अनुसार संसारको चक्र छैन । किन भने सबै केही अनित्य र अनात्मं (बिना आत्मा को) हुन्छ, केही पनि सच्चाइमा विद्यमान छैन । हरेक घटना मूलतः शुन्य हुन्छ। परंतु, मानव, जसका नजीकै ज्ञानको शक्ति छ, तृष्णा लाई, जुन दुःखको कारण छ, त्यागेर, तृष्णामा नष्टको भए शक्तिलाई ज्ञान र ध्यानमा बदलेर, निर्वाण पाउन सक्दछन् ।
आर्य अष्टांग मार्ग[सम्पादन गर्ने]
३. सम्यक वाक : हानिकारक कुरा नगर्न र झूट न बोल्न
६. सम्यक प्रयास : आफै सुधारने कोशिश गर्न
७. सम्यक स्मृति : स्पष्ट ज्ञानबाट देख्ने मानसिक योग्यता पाउनको कोशिश गर्न
८. सम्यक समाधि : निर्वाण पाउन र स्वयंको गायब हुनु
केहि मानिसहरू आर्य अष्टांग मार्गलाई पथको तरिका भनेर सोच्दछन्, जसमा अगाडी बढ्नको लागि, पछिल्लो स्तरलाई पाउन आवश्यक छ र मानिसहरूलाई लग्दछ कि यस मार्गका स्तर सबै संग-संगै पाएर जान्छन् । मार्गलाई तीन हिस्साहरूमा वर्गीकृत गरिन्छ : प्रज्ञा, शीला, र समाधि ।
लुम्बिनी · बोधगया
पछि को स्थल
हेर्नुहोस् • संवाद • सम्पादन
आत्मा नामको कुनै स्थायी चीज छैन । जसलाई मानिसहरू आत्मा सम्झन्छन, त्यो चेतनाको अविच्छिन्न प्रवाह छ।
शून्यता महायान बौद्ध संप्रदायको प्रधान दर्शन हो।
बुद्ध धर्ममा संघको ठुलो महत्त्व छ। यस धर्ममा बुद्ध, बुद्धको धर्म र बुद्धको संघलाई त्रिरत्नको रुपमा मानिने गरिन्छ। संघका नियमहरु विनयपिटकमा संग्रहित छन। अंगुत्तरनिकायको कलमसुत्तमा बुद्धले आफ्नो अनुभव अनुसार धर्म पालना गर्ने स्वतन्त्रता दिएका तथा बुद्धले धर्मका सानातिना नियमहरु परिवर्तन गर्न सकिने उपदेश दिएका हुनाले बुद्धको परिनिर्वाण पश्चात बुद्ध धर्ममा विभिन्न प्रकारका संघहरु स्थापित भए। यस्ता संघ तथा संघका शाखाहरुमा विनयपिटकका नियमको पालना, स्थानीय सांस्कृतिक प्रभाव तथा धर्मको निश्चित पक्षमा बढी केन्द्रित हुने आदि विषयमा भिन्न मत राख्दछन। संघमा नै आश्रित नभइकन बुद्ध धर्मलाई आध्यात्मिक रुपमा पालना गर्ने पनि परम्परा भएको देखिन्छ। ऐतिहासिक कालमा विभिन्न निकाय तथा संघहरु रहेतापनि वर्तमानमा प्रायःजसो संघहरु तीन महासंघको प्रभावमा रहेको पाइन्छ। यी संघहरु थेरवाद, महायान र बज्रयान हुन। थेरवादलाई भूलवश केही मानिसहरु हीनयान पनि भन्ने गर्दछन। तर, हीनयान वर्तमानमा अस्तित्त्वमा नरहेको एक बुद्ध धर्मको इकाइ हो भने थेरवाद बुद्ध धर्मका तीन मुख्य संघ मध्ये एक हो।
जान्नुहोस् बौद्ध धर्म को... - अनिरुद्ध जोशी 'शतायु'
मानव कल्याणमा आधारित हिंदू-बौद्ध धर्म
बौद्धधर्म तथा हिन्दूधर्मको परस्पर सम्बन्ध : लेखक - डा० अमित कुमार शर्मा; समाजशास्त्र विभाग, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
बौद्ध धर्म दर्शन (गूगल पुस्तक ; लेखक - आचार्य नरेन्द्र देव)
विकिमिडिया कमन्समा Buddhismसम्बन्धी अन्य सामग्रीहरू रहेका छन् ।
"https://ne.bywiki.com/w/index.php?title=बुद्ध_धर्म&oldid=612159" बाट निकालिएको
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक ११:३७, १९ जुन २०१७ मा परिवर्तन गरिएको थियो।